Waa caadi in la diido Faallo Xun | Martech Zone
Waa Okay In Aad Diido Faallo Xun
Arbacada, Oktoobar 3, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Markaan uhadlayo, sidaan maantaba uhadlay, dhagaystayaasha ganacsatada xiisaha uqaba blogga, kani waa bayaan inta badan nal nalka madaxooda u roga.
Haa. Waad dhexdhexaad ka noqon kartaa faallooyinka. Haa. Waa caadi inaad diiddo faallo diidmo ah. Waxaan kula talinayaa dhammaan ganacsiyada inay faallooyin dhexdhexaad ah ka bixiyaan. Waxaan sidoo kale ku dhiirigelinayaa isla ganacsiyadaas, in kastoo, ay falanqeeyaan fursadda iyo halista la xiriirta faallooyinka xun. Haddii ay tahay dhaliil wax dhisaysa oo wax qabad leh ama ay xallisay shirkaddaada, waxay kuu fureysaa fursad aad u wanaagsan oo aad ku muujiso daahfurnaan iyo inaad caddeyso inaadan dhageysan oo keliya, laakiin aad ku shaqeyneyso dhaliisha martidaada.
Waa wax lala yaabo in aan dhammaanteen fariisanno dadka oo aan u sheegayno sida furfuran iyo daah-furnaanta aan u rajeynayno ganacsiyada iyo kuwa aan u shaqeyno are laakiin markii aan ku jirno boos aan ku noqonno hufnaan, waxaan inta badan siinnaa fikrado labaad. Waxaan rumeysanahay inay jirto cabir ku saabsan faallooyinka iyo waxyaabaha adeegsadaha soo saaray oo u baahan in si dhow loola socdo loona falanqeeyo:
Soo-booqdayaasha qaarkood waxay noqon doonaan kuwo macno-darro ah, jeesjees ah, nacasnimo iyo / ama sharaf-dhac ah Waxaan ku dhiiri galin lahaa ganacsigaaga inay si toos ah ugu jawaabaan dadkan si ay xaalada u dejiyaan una ogeysiiyaan inaadan si fudud u ogolaan doonin waxyaabaha noocaas ah ee bartaada. Uma maleynayo inuu qofna ku eedeyn doono meherad inuu ka gaabsaday faallooyin awood u leh inuu waxyeelo u geysto ganacsigooda. Maaha wax daah furnaan ah waqtigaas, ee waa ilaalinta ganacsigaaga si shaqaalahaagu ugu sii wadan karaan noloshooda.
Taasi waxay tiri, waligaa ha diidin faallooyinka oo u dhaqaaq sida aysan waxba u dhicin. Haddii qofku lahaa geesinimo inuu kugu caayo websaydhkaaga, waxay yeelan doonaan dhiirranaan inay kugu caayaan websaydhkooda, sidoo kale. Fursadda ganacsi waa in lagala hadlo qofka 'qarka ka baxsan'. Xitaa haddii aadan wax ka sixi karin xaaladda, ku dadaal wixii aad ku dedaalaysid inay dantaadu ku jirto.
Faallooyin Xasaasi ah
Dadka soo booqda qaarkood waxay dhaliili doonaan ra'yigaaga, wax soo saarkaaga ama adeeggaaga. Tani waa aag cirro leh oo aad dooran karto inaad diido faallooyinka oo aad u sheegto, ama si ka sii fiican - waxaad ula macaamili kartaa dhaleeceynta si cad oo aad u ekaan kartaa geesi. Waxaad sidoo kale u oggolaan kartaa faallooyinka inay fadhiistaan ​​times marar badan dadku waxay dareemaan inay ku faraxsan yihiin inay dhiirranaadeen oo ay horay u socdeen. Waqtiyada kale, waad la yaabi tirada aqristayaasha kuugu imaan doona difaacaaga!
Haddii ay tahay dhaliil qiimo leh, laga yaabee inaad wadahadal la yeelan karto qofka sidan oo kale u socda…
Doug, waxaan ku helay aragtidaada safka dhex dhexaadnimada ah runtiina waxay ahayd jawaab celin weyn. Waxaan jeclaan lahaa inaanan ku wadaagin goobta - waxaan rajeynayaa inaad fahantay - laakiin fikirkaaga micno badan buu noo leeyahay anaguna waxaan jeclaan lahayn inaan kugu helno guddiga latalinta macaamiisha. Tani ma noqonaysaa wax aad xiisaynayso?
Waxaa jira abaalmarino iyo cawaaqib xumo ka timaadda qarinta diidmada. In kasta oo aad u malaynaysid inaad ka ilaalinaysid bartaada barta taban, waxaad halis ugu jirtaa inaad lumiso kalsoonida aad u leedahay akhristayaasha - gaar ahaan haddii ay ogaadaan inaad si joogto ah uga fogaanayso diidmada. Waxaan u maleynayaa inay tahay isku dheelitirnaan taxaddar leh laakiin marwalba waxaad ku soo bixi doontaa dusha sare markaad xallin karto arrinta, ama si daacadnimo leh u sharax habka aad u marayso.
Faallooyinka togan ayaa had iyo jeer noqon doona inta badan faallooyinkaaga…. i aamin Waa wax la yaab leh sida ay dadku ugu faraxsan yihiin shabakadda. 'Maalmihii yaraa' ee webka, ereyga loo adeegsaday qorista iimayl xun qof kale waxaa loo yaqaan 'olol'. Ma maqal wax badan oo ku saabsan folks 'olol' laakiin waxaan hubaa inay wali dhacdo.
Dhibaatada 'ololka' ayaa ah in xanaaqaaga xanaaq iyo diidmo uu leeyahay meel joogto ah oo shabaqa ah. Internetku waligiis uma muuqdo inuu iloobayo… qof, meel ayaa awoodi doonta inay qodo faallooyinkaaga wasakhda ah. Waan hubaa inaan uga tagay qaybta aan ku leeyahay faallooyinka diidmada ah halkaas, laakiin maalmahan waxaan si aad ah ula jaan qaadayaa ilaalinta sumcadda caafimaadka leh ee khadka tooska ah. Waxaan rumeysanahay in inta badan (dadka fayow) ay garanayaan sumcadooda internetka maalmahan ayna ku dadaali doonaan sidii ay u ilaalin lahaayeen.
Kiis ahaan qodobku waa Daahfurka John Chow oo ah nin waalan, in kasta oo aan gacmeed lahayn, shirqool baloogle ah si uu ugu isticmaalo faallooyin si daacadnimo darro ah ugu riixo meheradda jihada. John shaqo weyn ayuu qabtay oo ah baaritaanka iyo caddeynta daacad-darrada bologga su'aasha laga qabo. Magacaabista John ee xilkiisa ayaa qumman… balooggan ayaa baabi'iyay sumcadiisii. Yooxanaa waa soo sheegay!
Shakhsiyan, waxaan la kulmay bloggers kuwaas oo igu dhaleeceeyay qaar ka mid ah qoraaladayda. Falcelintu waxay ahayd mid cajaa’ib leh, dadka badankood dhag jalaq uma siin dhaliilahayga iyaga… waxay ku jawaabeen nacayb ay u qabaan diidmada 'ololka'. Dhinaca kale ee lacagta, waxaan ku yeeshay blogger (oo si aad ah loo yaqaan) oo ka booday deyntiisa aniga badeecad aan u sameeyay. Wuxuu kaloo iska ilaaliyay wakaalada aruurinta ee aan dul saaray.
Kama saari doono 'boggiisa' boggeyga inkasta oo ay aad u jilicsan tahay. Waxaan si fudud u aaminsanahay in dadku markaa ii eegi doonaan xoogsheegasho. Waxaan aaminsanahay inuu heli doono waxa ku soo dhacaya maalin uun. Barta internetku waxay u egtahay inay tahay shabakad isku xidhan oo saaxiibbo iyo asxaab ah oo midba midka kale ku farxa. 'Necebyaashu' waxay umuuqdaan inay ku jiraan geeska, 'ololayayaasha' ayaa gadaal udhawaa.
Feker badan ha dul saarin diidmada shabakada… halista la xiriirta hufnaantaada ayaa aad uga culus faa iidooyinka isku xirnaanta iyo dhismaha maamulka iyo sumcad. Marna ha ilaawin inay caadi tahay inaad diiddo faallo diidmo ah.
Tags: Anita CampbellSuuqa Suuq-geyntaJohn JantschMichael Stelznershirkii internetka ee ganacsiga yaryarganacsiga yaryarshirka ganacsiga yaryarIsbedelada Ganacsiga yaryar
Sida Loo Dhiso Khariidad Sawir leh CSS
Internet Explorer wuxuu dib uga fiirsanayaa adeegsigiisa
Oktoobar 4, 2007 at 8:04 AM
Qoraal wanaagsan, Doug. Tani dhab ahaan waa goob cirro leh oo dad badani aysan fahmin. Hadafka guud, dabcan, waa inuu noqdaa mid caqli badan (waa ka fududahay sida loo qabtay, waan ogahay). Sababtoo ah inaad * dhexdhexaad ka noqon karto faallooyinka oo aad iska ilaalin karto kuwa diidmada ah micnaheedu maahan inaad duurjoog aadna isku daydo inaad soo bandhigto sawir aad u jilicsan oo ku saabsan hay'addaada, alaabadaada ama magacaaga.
Xaqiiqdii, wax ka qabashada faallooyinka xasaasiga ah waxay ka xoog badan tahay kaliya muujinta hadalada dhalaalaya. Waa wax macquul ah waxayna muujineysaa xoog iyo daryeel.
Oktoobar 4, 2007 at 9:19 AM
Ma hubo inaan joojinayo nooca # 2, faallooyinka xasaasiga ah waa fikrad fiican. Gaar ahaan adoo sheegaya inaadan rabin inaad "la wadaagto barta - waxaan rajeynayaa inaad fahantay."
Run ahaantii, maya ma fahmin.
Iyo casuumaadda ku biirista Guddiga La-talinta Macaamiisha - waa maxay taasi? Erey kumeel gaar ah oo macnaheedu yahay waxba? Maxay noqon kartaa ugu badnaan emayl bille ah oo hal su'aal la waydiiyo? Mise waa Guddi dhab ah oo qof u qalmo inuu ku jiro natiijada hal faallooyin diidmo ah? Waxaan ka shakisanahay in qaar badani aakhirka rumaysan doonaan in 'xulashada' noocan oo kale ah ay tahay uun hab lagu tirtiro faallo oo lagu sameeyo.
Haddii urur doonayo inuu tirtiro faallo dhaliil oo daacad ah, oo si fiican loo qoray oo aan "macnaheedu ahayn", waa inay u oggolaadaan faallooyinkaas inay istaagaan. Haddii kale waa faaf-reeb rasmi ah xilligan daah-furnaanta.
Oktoobar 4, 2007 at 12:28 PM
Hambalyo Jonathan, waxaan u maleynayaa inaan isla simanahay midba midka kale, laga yaabee inaan sifiican iskufasixin. Xaqiiqdii waxaan ka hadlayaa baloogyada ganacsiga ee ma aha blogyada guud. Bogagga shirkadaha waxaan aaminsanahay in faallooyin kasta oo muhiim ah loo baahan yahay in si habboon loo qiimeeyo si loo go'aansado haddii ay jirto mudnaan lagu daabaco faallooyinka iyo in kale.
Faallo sida, "Waan jeclahay dalabkaaga laakiin ma ogtahay inaad dhaafin karto nidaamkaaga sirta ah adoo samaynaya x, y iyo z?". Waa faallo wax ku ool ah, oo waxtar leh, laakiin mid aad u adag oo aad u baahan tahay inaad u dirto dadka badan maxaa yeelay waxay halis gelineysaa ganacsigaaga.
Gudiga la talinta macaamiisha sida caadiga ah waa koox ka mid ah macaamiisha 'lagu kalsoon yahay' kuwaas oo aad si joogto ah ugu wacdo si ay u qiimeeyaan alaabadaada iyo adeegga aad ku siiso talo. Haddii aad haysato qof dhaleeceeya shirkaddaada oo kaaga tagaya farriimaha wax ku oolka ah ee ku yaal bartaada, waa inaad ugu yaraan ku qortaa awooddan.
Haddii aad faallooyinka soo dhigto iyo haddii kaleba adiga ayey kugu xiran tahay - waan kugu raacsanahay taas, inbadan oo aan ahayn, daabacaadda dhaleeceyn aan wanaagsaneyn MA bixin karto mustaqbalka fog haddii ay meheraddaadu kalsooni ku qabto nafteeda inay xalliso arrinta.
Waad ku mahadsantahay ku darida wadahadalkan!
Oktoobar 7, 2007 at 9:33 PM
Ma dhihi karo waan kugu raacsanahay, gaar ahaan tusaalahaaga, laakiin waxaan ka walaacsanahay (maahan dooddaada) shirkadaha taas oo umuuqata inay aad ugu faraxsanyihiin inay dadka dhigaan nooc ka mid ah awooda la-talinta ee macnaheedu yahay inay ka cararaan . Waxaan ku soo dhex jiray siyaasada waxaanan arkaa maskax badan oo xakamaynta-fariinta ah ilaa heer ay niyad jab tahay.
Taas marka la dhaho, faallooyinka liidaya waa inay la yimaadaan nooc sharaxaad ah. “Shaygaagu wuu nuugaa” ma shaqeeyo.
Oktoobar 4, 2007 at 10:18 AM
Waxaan u maleynayaa inaad u soo dhaadhacday xudunta arrinta "tranparency" ee ku saabsan qorista wax qorista. Wax isku mid ah ayaa u socda dhexdhexaadinta waxa shaqaalahaagu ku dhahaan baloogyada shirkadaha.
Waxaan u maleynayaa inay jiraan laba nooc oo "daahfurnaan" ah oo dhaca sababtoo ah baloog garaynta shirkadaha firfircoon:
1. Wadahadal dhab ah oo lala yeesho macaamiishaada.
2. PR shaqsi ahaan marka aad khalad samayso.
Midka hore ayaa ah faa iidada dhabta ah ee kororka baloog garaynta. Way fududahay inaad si toos ah uga hesho jawaab celin isticmaaleyaashaada, laga yaabee maxaa yeelay dadku waxay dareemayaan raaxo badan inay wax ku qoraan boggooda si aysan u dareemin inay ku qanacsan yihiin inay kuugu sheegaan taleefanka ama qaababka jawaab celintaada. Iyo haddii aad si toos ah uga jawaabi karto faallooyinka ama bartaada internetka, qof walba wuu guuleystaa.
Midda labaad ayaa ah tan u muuqata in lagu qalday hufnaan dhab ah. Haddii aad qirato "hey, waxaan ku sameynay qalad sii deyntii ugu dambeysay ee alaabteena" ka dib markii qof walba uu horey kuugu eedeeyay inaad wax uun qarineyso, sidee taasi runti u tahay hufnaan? Faa'iidada ugu weyn waxay umuuqataa inay tahay inay dadku si fudud kuugu fududaan karaan maxaa yeelay waa qof dhab ah oo qoraya baloogga, maahan waaxda PR ee aan wajiga lahayn. “Waxaan sameynay qalad. Waxaan nahay kaliya aadanaha. Shar ma nihin. Waan isku daynay. Waan sii fiicnaan doonaa marka xigta. ”
Oktoobar 4, 2007 at 12:31 PM
Waa qodob aad u fiican! Fursadda haysashada barta shirkaddu waa horseedi wadahadalka oo aan laga jawaabin. Waxaan la shaqeeyaa hal iibiye oo lahaa 2 go aan baryahan oo eray aan ka mid ahayn ku jiray boggooda.
Waxaan joojiyay akhriska boggooda (yada). Way cadahay inaysan rabin furfurnaan iyo daacadnimo aniga, waxay doonayeen inay isku dayaan inay qariyaan arinta. Waqtiga ugu habboon ee ay wax ku dhejin karaan wuxuu ahaan lahaa inta lagu guda jiro maqnaanshaha si ay dadka u ogeysiiyaan inay dusha ka saaran yihiin. Taabadalkeed, waxay lumiyeen kalsoonidii oo dhan aniga.
Oktoobar 7, 2007 at 1:56 PM
Doug - Weyn, boosteejo weyn. Waxaan si daacad ah u aaminsanahay in daacadnimada, diidmada, daacadnimada, iwm ay diyaar u tahay inay noqoto mid ka mid ah mowduucyada qarxa ee soo socda ee shakhsiyaadka iyo shirkadaha intaba.
Iyada oo ku saleysan khibradeyda gaarka ah, waxaan bilaabay inaan dadka kala shaqeeyo mowduuca maareynta magacyadooda “sumcadda internetka” ama internetka “magac shaqsiyeed,” taas oo qeyb ka ah dhacdadan oo dhan. Maareynta sumcadda maahan wax cusub, laakiin waxaan ku jirnaa xilli aan aad u yaraynno xakamaynta iyo makiinadaha raadinta waxay ka dhigan yihiin in waxyaabaha ku jira - ha noqdaan run ama run ma aha - macno ahaan weligood sii jiri karaan. Algorithm-ka Google, gaar ahaan, wuxuu u janjeeraa inuu abaalmariyo caannimada, ma ahan kalsooni taas oo si cad dhibaato ugu keeni karta qof kasta oo dadweyne ku filan inuu soo jiito dareenka iyo faallooyinka.
Farriintaydu had iyo jeer waa isku mid: ku xakamee aakhiradaada shabakadda. Abuur shaqsiyan dijitaal ah, nuxurkaaga. Iyo - Xaaladdaada boostada oo dadka u oggolaanaysa IN AAN la soo dhigin faallooyin aan si cad loola jeedin si daacadnimo ama runti ah - waxaan dhihi lahaa in farriimahayagu si fiican isugu habboon yihiin.
Thanks for boostada.
Oktoobar 7, 2007 at 2:26 PM
Waad ku mahadsantahay jawaabta fekerka leh, Stephanie! Waa aragti xiiso leh oo ku saabsan Google, gabi ahaanba waad saxantahay. Waan aqrinayay David Airey qoraalkiisii ​​ugu dambeeyay ee ku saabsan ciqaabta Google waana tusaale fiican. David wuxuu lahaa kalsooni weyn, laakiin Google ayaa ku ciqaabay 'shirkadda xiriiriyaha ee uu ilaaliyay' ma ahan waxyaabaha ku jira.
Maaddaama sumcadda ay noqotey mid aad u muhiim ah, Google iyo makiinadaha kale ee raadinta waa inay kala saaraan kalsoonida iyo caannimada. Ma ahan inaan booliisyada xiriiriya booliis, waa inay!
Oktoobar 7, 2007 at 9:47 PM
Waa wax lagu qoslo in tani ay u leexatay maareynta sumcadda. Shirkada aan la joogo, Abraham Harrison, waxay qabataa waxyaabo badan oo dhaqan celin ah oo khadka tooska ah ah waxaanan bilaabaynaa inaan aragno kor u kaca xiisaha adeegyadaas. Waxaan dhawaanahan ku qorayay boggan aniga lafteyda, barta dibedda, Wadahadalka Suuqgeynta (http://marketingconversation.com/2007/10/04/reputation-management-of-magnets-and-lead-paint/)
Shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay bartaan in maaraynta sumcadda ay aad uga sarreyso waxyaabaha soo jireenka ah. Faallooyinka xun waxay sii socon karaan waqti dheer, dheer.